Soo dejisan Speedfan 4.52 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaSpeedfan
Qeybta: Tijaabada iyo Tijaabooyinka
Bogga rasmiga ah: Speedfan
Speedfan – utility waxtar leh si ay ula socdaan danab, xawaaraha warejin of meeldhexaadka ah iyo heerkulka kumbiyuutarka. Waxyaabaha ugu weyn ee software-ka waa in la xeeriyo xawaaraha isku rogrogi of meeldhexaadka ah ee ku xidhan tahay cimilada goobahaas, kaas oo awood u ah in la yareeyo isticmaalka tamarta iyo dhawaaq xagga danbe ah. Speedfan ogolaanaya ka bedelaan si toos ah inta jeer bas processor gudaha iyo baska PCI. Software waxay kaloo bixisaa awoodda in ay muujiyaan muuqaallo kale ee isbedelka ee heerkulka, danab iyo taageere xawaaraha goobaha iyo xuduudaheedu ku qoraan si ay u file log ah.
Awoodda si ay ula qabsadaan xawaaraha isku rogrogi of qalab
Awoodda si ay u qoraan jeedo nidaamka
Soo dejisan Speedfan
Faallo ku saabsan Speedfan
Speedfan Xirfadaha la xiriira
Core Temp – tasiilaad si aad ula socoto heerkulka processor-ka oo aad u dejiso howlaha otomatiga ah si looga hortago kuleylka.
MSI Afterburner – waa qalab gacan qabad u leh si loo habeeyo oo loola socdo kaararka naqshadeeyayaasha kala duwan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la qabsato jaangooyooyinka qaarkood oo aad dardar gashid kaararka sawirrada.
Tani waa barnaamij yar oo loogu talagalay in lagu muujiyo macluumaadka ku saabsan qalabyada PCI ee lagu rakibay kombuyuutarka isticmaalaha.
Autoruns – aalad lagu xakameeyo rarida tooska ah ee codsiyada, adeegyada iyo qaybaha. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dejiso bilawga otomaatiga ah ee koonto badan.
Battle.net – waa adeeg ciyaar oo ciyaarta lagu socodsiinayo Blizzard. Sidoo kale, softiweerku wuxuu taageeraa awooda ciyaarta wadajirka ah ee internetka.
Metapad – tifatire qoraal deg deg ah oo leh astaamo waxtar leh. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay nidaam raadin caqli badan, badal furaha furaha wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad tiriso jilayaasha.